Ciidamo Is Hor Istaag Ku Sameeyay Xildhibaano U Socday Kulanka Golaha Shacabka – Great Banaadir
Ciidanka Booliska Dowladda Federaalka ee ku sugan Isgoyska Dabka ee Magaalada Muqdisho ayaa Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka u diiday inay ka gudban Koontaroolka laga ilaaliyo Madaxtooyada ee ku yaalla Isgoyskaa Dabka.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo Qoraal soo saaray ayaa sheegay in isaga iyo Xildhibaano kale oo la socda ay Ciidanka Booliska Dowladda u diideen inay u gudbaan Xarunta Filla (Villa) Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka oo kamid ah 15kii Xildhibaan oo Guddoomiyaha Golaha Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ka joojiyay Kulamada Baarlamaanka, ayaa waxaa uu sheegay in wixii Mas’uuliyad Darro ah ee ka dhashay Goobta uu qaadayo Maxamed Mursal.
“Isgoyska Dabka ayaa Ciidamo Farmaajo ka amar qaata hada nagu hortaagan yihiin aniga iyo Xildhibaano kale. Mas’uuliyada wixii na soo gaara Maxamed Mursal ayaa qaadaya,” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo ku sugan Isgoyska Dabka.
Ciidamo farabadan oo katirsan kuwa Booliska iyo NISA ayaa saakay la dhigay Waddooyinka laga soo galo iyo kuwa kabaxa Xarunta Madaxtooyada, waxaana la siiyay Ciidamada Sawiradda iyo Magacyada Xildhibaanada Laga Joojiyay Kulamada.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta kulan ku yeelanaya Xarunta Filla (Villa) Hargeysa, waxaana Xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in laga cabsi qabo in Golaha Shacabka oo Muddo Kororsi sameeyo.